China China- CQC Sevhisi uye Kuyedza | MCM
Maitiro uye Certification Gwaro
Muedzo wemuedzo: GB31241-2014: Lithium ion maseru uye mabhatiri anoshandiswa mune inotakurika zvigadzirwa zvemagetsi ― Kuchengetedzwa zvinodiwa
Certification gwaro: CQC11-464112-2015: Sekondari Bhatiri uye Bhatiri Kurongedza Kuchengetedza Certification Mitemo yeiyo Inotakurika Magetsi Midziyo
Mhemberero uye Zuva rekuitwa
1. GB31241-2014 yakaburitswa muna Zvita 5th, 2014;
2. GB31241-2014 yakashandisirwa zvine simba muna Nyamavhuvhu 1st, 2015.;
3. Musi waGumiguru 15, 2015, Certification uye Accreditation Administration yakapa resolution yehunyanzvi pane yakawedzera kuyedzwa standard GB31241 yechinhu chakakosha "bhatiri" yemodhiyo nemavhidhiyo michina, ruzivo rwetekinoroji michina uye telecom terminal michina. Sarudzo yacho inonongedza kuti mabhatiri e lithiamu anoshandiswa muzvigadzirwa zviri pamusoro anoda kuongororwa zvisina mwero se GB31241-2014, kana kuwana chitupa chakaparadzana.
Ongorora: GB 31241-2014 ndeye yenyika inomanikidzwa standard. Zvese lithiamu bhatiri zvigadzirwa zvinotengeswa muChina zvinoenderana neGB31241 standard. Iyi standard ichashandiswa mune itsva sampling zvirongwa zvenyika, matunhu uye emunharaunda ongororo kuongororwa.
GB31241-2014 Lithium ion maseru uye mabhatiri anoshandiswa mune inotakurika zvigadzirwa zvemagetsi ― Kuchengetedzwa zvinodiwa
Certification magwaro ndeyezvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi zvakarongerwa kunge zviri pasi pe18kg uye zvinogona kutakurwa nevashandisi. Mienzaniso mikuru ndeinotevera. Zvigadzirwa zvemagetsi zvinotakurika zvakanyorwa pazasi hazvisanganisi zvigadzirwa zvese, saka zvigadzirwa zvisina kunyorwa hazvireve kuti zviri kunze kwechiyero cheichi chiyero.
Midziyo inopfeka: Lithium-ion mabhatiri uye mapakeji ebhatiri anoshandiswa mune zvekushandisa anofanirwa kusangana nezvinodiwa.
Zvemagetsi chigadzirwa chikamu
Yakadzama mienzaniso yemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvemagetsi
Zvinotakurika zvigadzirwa zvemuhofisi
notibhuku, pda, nezvimwe.
Zvigadzirwa zvemafoni ekutaurirana mbozhanhare, isina tambo foni, Bluetooth mahedhifoni, walkie-talkie, nezvimwe.
Inotakurika odhiyo uye vhidhiyo zvigadzirwa inotakurika terevhizheni seti, inotakurika mutambi, kamera, vhidhiyo kamera, nezvimwe.
Zvimwe zvigadzirwa zvinotakurika electronic navigator, digital photo frame, mitambo yemitambo, e-mabhuku, nezvimwe.
● Kufanirwa kwekufanirwa: MCM iratidziro yechibvumirano cheCQC uye cheLaboriti yakafarirwa. Chirevo chekuyedza chakapihwa chinogona kunyoreswa zvakananga kuCQC kana CESI chitupa;
● Rutsigiro rwehunyanzvi: MCM ine yakaringana GB31241 yekuyedza michina uye inoshongedzwa neanopfuura gumi mahunyanzvi ehunyanzvi kuti aite zvakadzama tsvagiridzo yekuyedza tekinoroji, chitupa, kuongorora kwefekitori uye mamwe maitiro, ayo anogona kupa zvakaringana uye zvakagadziriswa GB 31241 certification masevhisi epasirese vatengi.
Pashure: EU- CE
Zvadaro: Bhuraziri- ANATEL
Chitupa Cqc Chitupa
Bhatiri Cqc Certification
Bhatiri Cqc Certification Mutengo
Bhatiri Cqc Certification Maitiro
Bhatiri Cqc Certification Sevhisi
Battery Cqc Lead Nguva
Bhatiri Cqc Quotation
Bhatiri Cqc Chirevo
Bhatiri Cqc Chinodiwa
Bhatiri Cqc Tsanangudzo
Bhatiri Cqc technical Zvinyorwa
Bhatiri Cqc technical Chinodiwa
Bhatiri Cqc Bvunzo
Bhatiri Cqc Bvunzo Zvinhu
Bhatiri Cqc Bvunzo Nzira
Bhatiri Cqc Bvunzo Yekuongorora
Bhatiri Cqc Kuedza Mutengo
Bhatiri Cqc Kuyedza Service
Bhatiri Cqc Yekuedza Nguva
Bhatiri Cqc Tr
Cqc Kuedza Lab
Cqc Kuedza Laborator
Fuel Cell Cqc